वाईफाईको पासवर्ड बिर्सनुभयो ? चिन्ता नगर्नुस्, सजिलो तरिकाले यसरी पत्ता लगाउनुहोस् - Technology Khabar
» वाईफाईको पासवर्ड बिर्सनुभयो ? चिन्ता नगर्नुस्, सजिलो तरिकाले यसरी पत्ता लगाउनुहोस्
वाईफाईको पासवर्ड बिर्सनुभयो ? चिन्ता नगर्नुस्, सजिलो तरिकाले यसरी पत्ता लगाउनुहोस्
यदि तपाईंले आफ्नो वाईफाई पासवर्ड पनि बिर्सनुभयो र जतिबेला यस्तो हुन्छ, हामी प्राय जसो वाईफाई अन गर्ने र अफ गर्ने तथा राउटर रिसेट गर्न पनि प्रयास गर्ने गर्दछौं । तर प्राय हामी असफल हुन्छौं।
तर के तपाईंलाई थाहा छ हामी वाईफाई रिसेट नगरीकन पासवर्ड फेला पार्न सक्दछौं। यो कसरी हुन्छ ? हामी तपाईँलाई यहाँ बताउँछौं।
सबैभन्दा पहिले तपाईले पासवर्ड खोज्न सक्नुहुनेछ। यो गर्नका लागि तपाईले विन्डोज र म्याक डिभाइसहरूमा जानु पर्छ र राउटरको सेटिङ्गस पेज खोल्नु पर्छ। तर यी दुबै विधिहरू काम गर्नको लागि, तपाईंको एक डिभाइस वाईफाई नेटवर्कमा कनेक्ट हुनुपर्दछ।
यदि प्रयोगकर्ताको उपकरण वाईफाईमा जडान गरिएको छैन भने, तिनीहरूले डब्लुपिएस (WPS) पुश बटन प्रयोग गर्न सक्दछ जुन राउटरको पछाडि अवस्थित हुन्छ वा ईथरनेट केबलको सहयोगमा कनेक्ट भएको राउटरको सेटिंग्स पेजमा जान सक्नुहुनेछ।
जब तपाईंको वाईफाई विन्डोज वा म्याक उपकरणसँग जोडिएको हुन्छ
सबैभन्दा पहिले विण्डोज वाईफाई विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्।
अप्शन छनौट गर्नुहोस् र त्यसपछि नेटवर्क र सेयरिङ्ग सेन्टर खोल्नुहोस्।
अर्को स्क्रिनमा चेन्ज एडप्टर सेटिंग्समा क्लिक गर्नुहोस्।
वाईफाई विकल्पमा डबल क्लिक गर्नुहोस् ।
वाईफाई स्ट्याटस पेज आईसकेपछि, वायरलेस प्रोपर्टिजमा क्लिक गर्नुहोस्।
सेक्यूरिटी ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस् र शो पासवर्ड रोज्नुहोस् र अब पासवर्ड हेर्नुहोस्।
जब तपाईंको वाईफाई कुनैपनि डिभाइसमा कनेक्ट हुँदैन्
इथरनेट केबल लिनुहोस् र यसलाई विन्डोज डिभाइससँग जोड्नुहोस्।
विन्डोज पीसीमा RJ45 केबल जोड्नुहोस् र राउटरको कन्फिगरेसन पृष्ठ खोल्नुहोस्। अब लग इन गर्नुहोस् ।
एक चोटि लग इन भएपछि, राउटरमा वाईफाई विकल्प क्लिक गर्नुहोस् र पासवर्ड वा सेक्यूरिटी विकल्प खोज्नुहोस्।
पासवर्ड हेर्न शो पासवर्डमा क्लिक गर्नुहोस्।
डब्लुपिएस (WPS) बटन यदि डिभाइससंग जोडिएको छ भने
डब्लुपिएस (WPS) ले प्रयोगकर्तालाई पासवर्डको सहयोगमा वाईफाईमा कनेक्ट गर्न विकल्प दिन्छ। यसको लागि प्रयोगकर्ताहरूले राउटरको पछाडि डब्लुपिएस बटन क्लिक गर्नुपर्दछ। यसपछि, प्रयोगकर्ताले सेटअप पेजमा सिधा जान सक्छ र पासवर्ड खोज्न सक्छ।
ओटिसी एप्स नेपालमा दर्ता गरेर राजस्व उठाउ- महालेखापरीक्षकको सुझाब
शेयर कारोबारसँग सम्बन्धित सबै काम विद्युतीय माध्यमबाटै गराउन ब्रोकर एसोशिएसनको आग्रह
जब प्रतिस्पर्धी मोबाइल वालेटहरु ‘खल्ती’ र ‘इसेवा’ लाई ‘आइएमई पे’ ले भन्यो- ‘ह्याप्पी बर्थडे’…
यी स्मार्टफोनमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम र मेसेन्जर बन्द हुने
अमेरिकाले ह्वावेमाथि लगाएको प्रतिबन्ध लागू भएसँगै स्मार्टफोनका स्टक सकिँदै